लालबाबु पण्डितको प्रक्षेपणः मधेसमा एमालेले जितेको देखेर अरु बेहोस हुनेछन् | NepalDainik
लालबाबु पण्डितको प्रक्षेपणः मधेसमा एमालेले जितेको देखेर अरु बेहोस हुनेछन्
एमालेका नेता पण्डितसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानी
लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा जनताबाट निकै प्रशंसा पाएका एमाले नेता हुन् । मधेसी मुलका सादगी यी नेता अहिले एमालेको चुनाव अभियान अन्तर्गत तराईका जिल्लामा सक्रिय छन् । तराई मधेसमा एमाले विरुद्ध सबै एक ठाउँमा उभिए पनि त्यहाँका मतदाताले एमालेलाई पहिलो शक्तिका रुपमा चुनेर पठाउने उनको मुल्यांकन रहेछ । एमालेका नेता पण्डितसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सकिएर दोस्रो चरणको चुनावको तयारीमा छौं हामी । तपाई तराई मधेसमै हुनुहुन्छ यतिबेला कस्तो छ तराईमा चुनावको माहौल ?
हिजो पहिलो चरणको चुनावमा जस्तो थियो त्यो भन्दा पनि धेरै उत्साह छ तराईमा । चुनाव आयो भनेर जनताहरु त्यो समयमा पर्ने काम सकाउने र त्यो बेला भोट खसाल्न जाने योजना बनाएर काम गर्दैछन् । उम्मेदवारहरु मतदाताको घर घर पुगेका छन् । धेरै पछि आएको चुनावको रौनक होली पर्वजस्तै भएको छ । चोक चोक, टोल टोलमा, वडामा उम्मेदवार र भोट हाल्ने कुराको छलफल चलिरहेको छ । धेरै लामो समयमा चुनाव भएकोले हुनपर्छ साँच्चै हेर्न र सुन्न लायक छ तराईमा अहिले राजनीतिक बहस ।
चुनाव हुन्छ भन्नेमा कत्तिको आशाबादी छन् त्यहाँका जनता ?
बर्खाको मौसमले असर गर्ने बाहेक अब कुनै हालतमा चुनावमा ढिलाई हुनु हुँदैन । कुनै पनि हालतमा चुनाव हुनुपर्छ । चुनावकै दिन कुरेर बसेका छन् तराईका जनता । तराईमा अहिले गर्मी बढे जसरी नै चुनावको तयारीमा तराई तातेको छ । त्यहाँ खुसियाली छाएको छ । चुनाव प्रतिको उत्साह कतिसम्म छ भने नारेको हलगोरु विसाएर पनि जनता मिटिङमा आउँछन् । तोकेको चुनाव हुँदैन भन्यो भने तराईका जनताले प्रतिकार गर्ने अवस्था छ अहिले तराईमा । हामीले देखे जस्तो होइन यो सूचनाको पहुचले उनीहरु देशको राजनीतिक अवस्थाप्रति सुझबुझ राख्छन् ।
तपाईं त्यसो भन्नुहुन्छ , तराईमा अहिले पनि कति दल त चुनाव नै हुन दिन्नौं भनिरहेका छन् नि ?
तपाईंले देखिहाल्नु भो हिजो मात्र सप्तरीमा कायक्रम गरेर राजपाकै केन्द्रीय स्तरका तीन जना नेता एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो । त्यहाँ मात्र होइन तराई भरिनै यहि माहौल छ । केही नेताहरु जो चुनाव लड्दैनन् र चुनाव लडे पनि जित्दैनन् उनीहरु केही आयातित मागलाई आफ्नो माग भन्दै बसेका छन् । तर उनीहरुका पार्टीकै केन्द्रीय, जिल्ला र गाँउ तहका नेताहरु नै अन्य दलमा गएर मेयर उपमेयर, वडाअध्यक्षमा उठेर भोट माग्दैछन् । कि त उनीहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेर चुनाबी मैदानमा आएका छन् । अहिले बहिस्कारको चाहिँ कहिँ कतै केही पनि सुनिंदैन । काठमाडौंमा सुनेजस्तो तराईमा चुनाव नहुने भन्ने कुरा यहाँ सत्य होइन । यहीँ आएर हेरुन् न सबैले यहाँ चुनावप्रति जनता कति उत्साहित छन् ।
तपाईं तराईका जनता चुनावमा भोट हाल्न अतुर छन् भन्नुहुन्छ केही दलका केही नेता एक्लै परे पनि चुनावमा जाँदैनौ भनेर अझै भन्दैछन् त ?
जनतामै जाँदैनौं भन्नेलाई त म के भनौं र ? जो जाँदैनन् उनीहरु नै जानुस् । उनीहरुको सिद्धान्त नीति, योजना यहाँका जनताका लागि होइन भने उनीहरुले नै भनुन् । हामीले उनीहरुलाई केही भन्नु आवश्यक छैन, जे जे भन्नु जनताले भन्छन् । तराई मधेसका जनताका लागि उनीहरुका एजेण्डा के हुन् ? जनतालाई विश्वास लाग्नेगरी भन्न सक्नु परेन ? जनतालाई त्यति भन्न नसक्ने, जनताको होइन अर्कैको कुरा बोकेर हिंड्नेहरुलाई आपत पर्नु स्वाभाविकै हो । यो चुनावमा जनताले को मधेसको पक्षमा छ को मधेसको पक्षमा छैन राम्रोसँग छान्छन् । चुनावपछि हेर्नुहोला यिनीहरु चौलानीमा भुस छानिएर तैरिएजसरी तैरिन्छन् ।
तराई मधेसमा तपाईंको पार्टी एमालेको चाहीँ कस्तो छ त अवस्था ?
तपाईंले पनि सुन्नु भयो होला, हिजो मात्र सप्तरीमा त्यही आन्दोलनकारी दलका केन्द्रीय तहका तीन जना सहित सयौं नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो । अनि उहाँहरु नै एमालेको उम्मेदवार बनेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र एउटै वडामा चारचार जनासम्म वडाअध्यक्षका दावेदार भएर मिलाउन हामीलाई हम्मे परेको छ । एमालेको लहर नभएको भए यस्तो हुन्थ्यो ? त्यसमाथि जित्ने पार्टी एमाले नै हो भन्ने भएपछि क्षेत्रीय दलका नेता कार्यकर्ता पनि धमाधम एमालेमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ । पहिलो चरणको चुनावमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा आउन पनि कांग्रेस र माओवादी मिल्नु पर्यो । एमालेले घना जनसंख्या भएका अर्वान क्षेत्रहरुमा गठबन्धन गरेर आएका माओवादी कांग्रेसलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्यो । जनमतको हिसावले उनीहरु भन्दा भएमाले निधै माथि देखियो । सिटको हिसावले पनि एमाले पहिलो देखियो । अव दोस्रो चरणको चुनावमा त एमालेको जीतको रफ्ता यसको दोब्बर हुन्छ । एमाले विरुद्ध सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुनुको कारण पनि यही हो । एमाले कमजोर भएको भए बाँकी सबैलाई गठबन्धन बनाइरहनु जरुरी थियो र ?
एमालेलाई मधेस विरोधी भन्ने गरिन्छ, तराई मधेसमा एमालेले जित्ने आधार चाहिँ के छन् त ?
तराई मधेसका जनताले एमालेलाई मधेस विरोधी भनेका हुन् र ? तराई मधेसमा एमालेले गरेका कामले अव हामी टिक्न नसक्ने भयौं भनेर आत्तिएकाहरुले एमाले मधेस विरोधी भनेका हुन् । यहाँ एमाले विरुद्ध एक्लाएक्लै चुनावमा आउने हैसियत नभएकाहरुले एमालेलाई मधेस विरोधी भनेर हल्ला चलाएका हुन् । तर, यहाँका जनताले काम गर्ने एमाले, भ्रम बाँडेर हिंसाको खेती गर्ने अरु हुन् भन्ने बुझेका छन् ।
मधेसमा एमालेले मात्र राम्रो काम गर्यो भन्ने पुष्टि गर्न तपाईंसँग आधारहरु के के छन् ?
लौ सुन्नुस् राम्रोसँग– एमाले मधेस विरोधी भनेर हल्ला चलाउँदै जसले आफूलाई मधेसको मसिहा भनिरहेका छन् उनीहरु अहिले पनि सरकारमा सँगै छन् । उनीहरु दुई पक्षजस्तो देखाउँछन् तर, एउटै पक्ष हो । एउटा पक्ष यहाँका जनतालाई आन्दोलनका नाममा हिंसामा होम्छ, अर्काेपक्षले गोली चलाएर जनतालाई मार्छ । अनि उनीहरुका नाममा राज्यबाट रकम लिएर आफैं खान्छ । अनि एमाले मधेस विरोधी भनेर हल्ला चलाउँछ ।
एमालेले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यहाँका गरिव जनतालाई बिपन्न आवासको नाममा २० हजार घर बनाउने बजेट दिन्छ । यहाँको हुलाकी राजमार्ग बनाउन पैसा दिन्छ । यहाँका सदरमुकामका सहरलाई आधुनिकीकरण गर्न दश दश करोडका दरले पैसा दिन्छ । सिंचाईंका लागि बजेट छुट्याउँछ । सडक फराकिलो पार्न पैसा छुट्याउँछ । यो त सबैले देखेकै कुरा हो नि । मधेसी जनताको हितमा उनीहरुले राम्रो काम गरे कि एमालेले ल तपाईं नै छुट्याउनुस् । हामी समृद्ध मधेस बनाउन चाहन्छौं, उनीहरु एउटा एउटा निहुँमा मधेसलाई हिंसामा ईन्गेज गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र मधेसी जनतालाई सधैं हिंसाको शिकार र गरिव बनाउन चाहन्छन् ।
होइन, मधेससँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एमालेले मानेन पो भन्छन् त ?
तपाईं पत्रकारहरु पनि अहिलेसम्म यस्तै भ्रमपूर्ण कुरा गरिरहनु भएको छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ । मधेसको आन्दोलनका नाममा एमालेले आजसम्म कहिले के सम्झौता गरेको थियो भन्नुस् त ? सबै सम्झौता गर्ने कांग्रेसको सरकार हो र सबै सम्झौता पूरा नगर्ने पनि कांग्रेसकै सरकार हो । त्यही कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेर बसेका क्षेत्रीय दलहरुले सम्झौता पूरा नगर्ने कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा बस्ने र सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको दोष एमालेमाथि लगाउने गरेका छन् । ल आजसम्म एमालेले के सम्झौता गरेर उल्लंघन गर्यो एउटा उदाहरण तपाईं ल्याउनुस् । सम्झौता गरेर सम्झौतामा धोका दिने त्यही कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा बस्नेहरुले लाजै नमानी एमाले मधेस विरोधी भन्ने हल्ला चलाएका मात्रै हुन् ।
तराईमा प्रमुख तीन दलको चुनावी माहोल चाहिँ कस्तो छ ?
तराईमा एमालेसँग एक्लै सामना गर्न न कांग्रेस, न माओबादी, न मधेसकेन्द्रित दल कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले अब दोस्रो चरणको चुनावमा कांग्रेस र माओबादीसँग अर्को मधेसकेन्द्रित दल जोडिएर आए पनि एमालेलाई जित्न सक्दैनन् । कतिपय ठाउँमा त तीनवटा मात्र हैन एमाले बाहेकका सबै दल एक ठाउँमा भए पनि एमालेको जीत सुनिश्चित छ । मैले त्यसै बोलेको होइन । हेर्दै जानुस् तराई मधेसमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ ।
मधेस मधेस भन्ने अरुको नाराले एमालेलाई असर पर्ला कि जस्तो लाग्दैन ?
उनीहरुले भनेका मात्रै मधेस हुन्, सबै काम आफ्नो स्वार्थ अनुकुल गर्छन् । उनीहरुको नारा यहाँका बस्तीमा होइन काठमाडौंबाट निस्कने अखवारका पानामा मात्रै छ । केहीले विदेशीका भान्सामा भोज खाएर गाएको गानालाई यहाँका जनताको ठान्ने भूल उनीहरुले गरेका छन्, जुन कुरा यहाँका जनताले बुझेका छन् ।
तपाईं पनि विराटनगरको मेयरमा उठ्ने कुरा आएको थियो के साँचो हो ?
होइन । मेरो त्यस्तो कुनै योजना छैन । पार्टीका साथीहरुले मेरो अपेक्षा गर्नु राम्रो कुरा हो । तर यहाँ एकसेएक पार्टीका युवा साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नै त्यो बागडोर सम्हाल्नु हुनेछ । पार्टीलाई जिताउन म मेरो ठाउँबाट लागि पर्नेछु । अहिले पनि हामी यहिँ खटिरहेका छौं ।
Posted by Becoming Kishor at 7:35 PM
No Comment to " लालबाबु पण्डितको प्रक्षेपणः मधेसमा एमालेले जितेको देखेर अरु बेहोस हुनेछन् "